Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo Caawa Duqeeyay Saldhigga Af-urur. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo Caawa Duqeeyay Saldhigga Af-urur.
Ciidamada shabaabul Mujaahidiin ee ka howlgala dhulka buuralayda ah ee silsiladda Goolis waxay caawa tiro madaafiic ku weerareen saldhigga ciidamada maamulka Puntland ay ka samaysteen deegaanka Af-urur oo qiyaastii 70 KM dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Ilo wareedyo masuul ah waxay sheegayaan in saldhigga ciidamada maamulka Ridada Puntland ee deegaanka Af-urur lagu dhuftay 15 hoobiye kuwaas oo qaarkoood lasoo wariyay inay ku dhaceen gudaha xerada ciidanka ee Af-urur.
Macluumaadkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in madaafiicda Mujaahidiinta ay waxyeello kala duwan gaarsiiyeen dhismaha xerada murtadiinta. goobjoogeyaal ayaana soo wariyay inay arkayeen qiic iyo uura madow oo cirka isku shareertay hawada deegaanka ka dib weerarka Mujaahidiinta.
Idaacadda Al-andalus ee ku hadasha afka xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab waxay baahisay in madaafiicdan lagu garaacay saldhigga deegaanka Af-urur ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen maleeshiyaad ka tirsan maamulka ashahaada la dirirka Puntland.
Saldhigga maleeshiyaadka maamulka Puntland ee deegaanka Af-urur ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale u martigaliyay weeraro madaafiic ah iyo kuwa toos ah waxaana ugu caansanaa weerarkii sida xun loogu xasuuqay maleeshiyaadka Puntland ee saldhiggan ka dhacay sannadkii 2017-dii.